Otu esi arịọ Chineke mgbaghara | Ahụrụ m Jizọs n'anya
di Paolo Tescione - Disemba 15, 2020
Hụ foto ndị yiri ya:
Ahụhụwo m ma merụọ ahụ ọtụtụ oge na ndụ m. Ọbụghị naanị na omume ndị ọzọ metụtara m, kama na mmehie m, enwere m ọgụ na iwe na ihere, na-eme ka m ghara ịgbaghara. E tiela obi m ihe, merụọ m ahụ, akara aka ekpe, ịkwa ụta, nchekasị na ntụhie nke mmehie. Enweela ọtụtụ oge mgbe nmehie na mgbu m mere onye ọzọ mere m ihere, na enweela ọtụtụ oge mgbe ọnọdụ ndị karịrị ikike m mere ka m wewe iwe na iwe nke Chukwu.
Enweghị nke mmetụta uche ndị a ma ọ bụ nhọrọ m niile bụ nke dị mma, ọ dịghịkwa nke ọ bụla na-eduga m na ndụ bara ụba nke Jizọs na-ekwu maka ha na John 10: 10: “Onye ohi na-abịa naanị izu ohi, gbuo, na ibibi. Abịara m nwee ndụ ma nwee ya n'ụba. "
Onye ori na-abịa izu ohi, gbuo ma bibie, ma Jizọs na-enye ndụ bara ụba. Ajụjụ bụ kedu? Kedụ ka anyị ga-esi nweta ndụ a n'ụba na kedu ka anyị si wee wute iwe a, iwe megide Chukwu na mgbu na-enweghị mkpụrụ nke jupụtara ebe niile n'etiti mgbu?
Olee otú Chineke si agbaghara anyị?
Mgbaghara Chineke bụ azịza ya. Nwere ike mechie taabụ na edemede a ma gaa n'ihu, kwenye na mgbaghara dị oke ibu, buru oke ibu, mana a ga m arịọ gị ka ị gee m ntị. Anaghi m ede edemede a n’otu ebe obi di ike ma nwekwaa obi. Ọ gbalịsiri m ike ịgbaghara onye mejọrọ m ụnyaahụ. Amaara m nke ọma ihe mgbu nke ịbụ onye mebiri emebi ma ọ dịkwa mkpa ka a gbaghara ma gbaghara. Mgbaghara abụghị naanị ihe anyị ga-achịkọta ike inye, mana a na-ebu ụzọ nye ya n'efu ka anyị wee nwee ike ịgwọ ọrịa.
Chineke na-ebu ụzọ agbaghara mmehie site n'isi ruo n'ọgwụgwụ
Mgbe Adam na Iv nọ n'ogige ahụ - mmadụ mbụ Chineke kere - ha jere ije n'ụzọ zuru oke na mmekọrịta Ya na anya mmiri, ịrụsi ọrụ ike, ọgụ na mgba ruo ọdịda, mgbe ha jụrụ ịchịisi Chineke. , ihe mgbu na ihere batara n'ụwa mmehie wee jiri ike ya niile. Adam na Iv pụrụ ajụwo onye kere ha, ma Chineke anọgidewo na-ekwesị ntụkwasị obi n'agbanyeghị nnupụisi ha. Kiet ke otu akpa edinam emi Abasi ewetde ke ndondo oro edi eke erifen owo, nte Abasi akawade akpa uwa ndifuk idi theirk-,kp their mmo, ke owo m askingbupke enye (Genesis 3:21). Ngbaghara nke Chineke bughi site na anyi, na mbu ka ebidoro site na ya. O nyere amara n’elu amara, gbaghara ha mmehie nke mbụ ma kwe nkwa na otu ụbọchị na ya ga-eme ka ihe niile zue oke site na ịchụ aja na onye nzọpụta ikpeazụ, Jesu.
Jesus efen ọnọ akpa ye akpatre
Akụkụ anyị na mgbaghara bụ nrubeisi, mana ọ bụghị ọrụ anyị ịgbakọ ma bido. Chineke buuru ibu nke mmehie Adam na Iv site n’ogige ahụ gawa, dịka Ọ na-ebukwa ibu nke mmehie anyị. A kwara Jizọs, Ọkpara Chineke dị nsọ emo, nwaa ya, eyi ya egwu, raara ya nye, nwee obi abụọ, pịa ma hapụ ịnwụ nanị ya n'elu obe. O kwere ka a kwaa ya emo, kpọgidekwa ya n’osisi, n’enweghị ezi ihe kpatara ya. Jizọs natara ihe Adam na Iv kwesịrị inweta n'ogige ahụ wee nata ọnụma zuru oke nke Chineke dịka o were ntaramahụhụ maka mmehie anyị. Omume kacha mwute n’ime akụkọ ntolite nke mmadụ mere n’elu nwoke zuru-oke, na-eme ka ọ gbakụta Nna ya azụ n’ihi mgbaghara anyị. Dika John 3:16 -18 na-ekwu, a na-agbaghara ndị a kwenyere na mgbaghara a kpamkpam:
“N’ihi na Chineke hụrụ ụwa n’anya otu a, na O nyere ọbụna Ọkpara Ọ mụrụ naanị Ya, ka onye ọbụla nke kwere na Ya wee ghara ịla n’iyi kama ka o nwee ndụ ebighi ebi. N'ihi na Chineke eziteghi Ọkpara ya n'ụwa ka O kpee ụwa ikpe, kama ka e wee site n'aka ya zọpụta ụwa. Ekpeghi onye kwere na Ya ikpé: ma ekpeghi onye ọ bula nke kwere na Ya ikpé ub becauseu a n'ihi na o kweghi n'aha nke Ọkpara Chineke muru nání Ya.
Jisus abụọ n’etinye mgbaghara n’enwe okwukwe site n’okwukwe n’oziọma na, n’echiche, na-egbu ihe niile a na-agaghị agbaghara (Ndị Rom 5: 12–21, Ndị Filipaị 3: 8–9, 2 Ndị Kọrịnt 5: 19–21) . Jizọs, n'obe, abụghị naanị ịnwụ maka otu mmehie ma ọ bụ mmehie gara aga ị na-agba mgba, kama ọ na-enye mgbaghara zuru oke na na njedebe mgbe ọ bilitere site na mmeri siri ike, mmehie, Setan na ọnwụ ruo mgbe ebighị ebi. Mbilite n'ọnwụ ya na-enye nnwere onwe ịgbaghara na ndụ bara ụba na-eso ya.
Olee otu anyi si anata mgbaghara nke Chineke?
Enweghị okwu anwansi anyị ga-ekwu maka Chukwu gbaghara anyị. Anyi na-anata ebere Chineke n’ime obi umeala site na ikweta na anyi bu ndi nmehie nke choro amara ya. Na Luk 8: 13 (AMP), Jizọs nyere anyị ihe osise nke ihe ekpere maka mgbaghara mmehie dị ka:
“Ma onye ọnaụtụ ahụ guzo ebe dị anya, o leghịkwa anya n’eluigwe, kama ọ kụrụ obi ya [jiri obi umeala na nchegharị] wee sị,‘ Chineke, meere m ebere ma meere m ebere, nke bụ́ onye mmehie [karịsịa ndị ajọ omume] [ na m bụ]! '"
Nata mgbaghara nke Chineke bido site n’ikwere nmehie anyị na ịrịọ maka amara Ya. Anyị na-eme nke a n'omume nke ịzọpụta okwukwe, dịka anyị kwenyere na nke mbụ ya na ndụ, ọnwụ na mbilite n'ọnwụ Jizọs na dịka nrube isi na-aga n'ihu na nchegharị. John 1: 9 kwuru, sị:
Ọ buru na ayi asi na ayi enweghi nmehie, ayi n deceduhie onwe-ayi, ezi-okwu adighi kwa nime ayi. Ọ bụrụ na anyị ekwupụta mmehie anyị, ọ bụ ikwesị ntụkwasị obi na ikpe ziri ezi ịgbaghara anyị mmehie anyị ma sachapụ anyị ikpe na-ezighị ezi niile ”.
N’agbanyeghi na agbagharawo anyi ma zie anyi n’onye ezi omume site na ikwere na ozioma nke nzoputa, nmehie anyi arapughi anyi n’ozi ebube ruo mgbe ebighi ebi Anyị ka na-alụso mmehie ọgụ, anyị ga-eme ya ruo ụbọchị Jizọs ga-alọghachi. N'ihi oge a “ihe fọkarịrị, mana oge erubeghị” nke anyị bi na ya, anyị ga-agariri n’ihu na-eme nkwupụta mmehie anyị nye Jizọs ma chegharịa n ’mmehie niile. Stephen Wellum, n’edemede ya, Ọ bụrụ na agbagharawo m nmehie m nile, gịnị kpatara m ga-eji nọgide na-echegharị? , ọ na-ekwu ya dị ka nke a:
“Anyi zuru oke n’ime Kraist mgbe niile, mana anyi na ezi Chineke bukwa ndi ozo, site na ntukwasi obi, n’ime nmekorita nke mmadu, anyi maara ihe banyere eziokwu a. Dị ka nne ma ọ bụ nna, mụ na ụmụ m ise nwere mmekọrịta. Ebe ha bu ezi-na-ulo m, a gaghi acho ha; mmekọrịta ahụ na-adịgide adịgide. Otu osila dị, ọ bụrụ na ha emehie megide m, ma ọ bụ mụ emehie ha, mmekọrịta anyị na-enwe nsogbu, ọ dịkwa mkpa ka e weghachi. Ọgbụgba ndụ anyị na Chineke na-arụ ọrụ n'otu ụzọ ahụ. Nke a bụ otu anyị nwere ike isi ghọta n'echiche ziri ezi anyị zuru oke na nkuzi nke Kraịst na akwụkwọ nsọ na anyị chọrọ mgbaghara na-aga n'ihu. Site n’ịrịọ Chineke ka Ọ gbaghara anyị, anyị anaghị atụnye ihe ọbụla n’ọrụ Kristi zuru oke. Kama nke ahụ, anyị na-etinyeghachi ihe Kraịst mere anyị dịka isi ọgbụgba ndụ anyị na Onye Mgbapụta. ”
Iji nyere obi anyi aka ka anyi ghara inwe oke nganga na ihu abuo, anyi aghaghi igosiputa nmehie anyi ma rio mgbaghara ka anyi we bi ndu anyi na Chineke. nke mmehie na ndu anyi. Anyi aghaghi ịrịọ mgbaghara maka otu oge ịgha ụgha, dịka anyị na-arịọ mgbaghara maka ị addictionụ ọgwụ ọjọọ na-aga n'ihu. Ha abua choro nkwuputa anyi ma ha chokwara otu ncheghari ahu: inye ndu nke nmehie, itughari n’elu obe na ikwere na Jisos ka nma. Anyị na-alụso mmehie ọgụ site na ime ihe n'eziokwu na mgba anyị na-alụso mmehie site na ikwupụta Chineke na ndị ọzọ. Anyị na-elebe anya n'obe na-amasị ihe niile Jizọs mere iji gbaghara anyị, ma hapụ ya ka ọ zụlite nrube isi anyị n'okwukwe na Ya.
Mgbaghara Chineke na-enye ndụ na ndụ n'ụba
Site na mbido na ịzọpụta Chineke anyị na-enweta ndụ ọgaranya ma gbanwee. Nke a pụtara na “a kpọgidere anyị na Kraịst n’obe. Ọ bụghị m na-ebi, kama Christ bi m. Ma ndu nke m bi ugbu a na anụ arụ m na-ebi site n'okwukwe nke Ọkpara Chineke, onye hụrụ m n'anya ma nyefee onwe ya maka m "(Ndị Galeshia 2:20).
Mgbaghara nke Chineke na-akpọ anyị ka anyị “yipụ mmadụ ochie gị, nke bụ nke ụzọ ndụ ochie gị na nke rụrụ arụ site n’ọchịchọ aghụghọ, ka e megharịa gị na mmụọ nke uche gị, wee yikwasị onwe gị ụdị mmadụ ọhụrụ ahụ, nke emere n’oyiyi nke Chineke n’ezi ikpe na ịdị-nsọ ”(Ndị Efesọs 4: 22-24).
Site n'oziọma, anyị nwere ike ịgbaghara ndi ọzọ n'ihi na Jizọs buru ụzọ gbaghara anyị (Ndị Efesọs 4:32). Gbaghara anyị site na Kristi bilitere pụtara na anyị nwere ike ị lụso ọnwụnwa nke onye iro ọgụ (2 Ndị Kọrịnt 5: 19-21). Nata mgbaghara Chineke naanị site na amara, naanị site n'okwukwe, naanị na Kraịst na-enye anyị ịhụnanya, ọ joyụ, udo, ndidi, obiọma, ịdị mma, obiọma, ikwesị ntụkwasị obi na njide onwe onye nke Chineke ugbu a na ebighi ebi (John 5:24, Ndi Galetia 5: 22-23). Ọ bụ site na mmụọ ọhụrụ a ka anyị na-achọ mgbe niile itolite n’amara Chukwu ma gbatịa amara Chineke nye ndị ọzọ. Ọ dịghị mgbe Chineke na-ahapụ anyị ka anyị ghọta mgbaghara. Ọ na-enye anyị ụzọ iji gbaghara anyị site n’aka nwa ya ma na-enyekwa mmadụ gbanwere ndụ nke na-enye udo na nghọta dịka anyị na-achọ ịgbaghara ndị ọzọ.